Sikufisela umhla ka-4 Julayi omuhle! Kungakhokhela Ukuthanda izwe kwi-Social Media | Martech Zone
NgoMgqibelo, July 4, 2015 NgoMgqibelo, July 4, 2015 Douglas Karr
E-United States, sigubha usuku lokuzimela namuhla… kolunye usuku lwaziwa njengo-Julayi 4. I-Patriotism ingenye yalezo zinto ezingadonsela ukunakwa okuningi futhi zakhe ukulingana komkhiqizo. Imithombo yezokuxhumana, yebo, iyisiteshi esifanele ukubandakanya izithameli zakho mathupha. Hlanganisa lokhu ndawonye futhi unethuba elihle lokukhombisa ukuthanda izwe lakho futhi uthole amasheya amakhulu uma ushisa imizwa ethile ngokuqukethwe kwakho.
Ngifisa sengathi ngabe ngithole le infographic kusuka ku- Okungafani ngenyanga edlule ukuze ube nesikhathi sokuzilungiselela, kepha ungabeka ibhukhimakhi kuleli khasi ukuze ulungiselele uJuni olandelayo! I-Unmetric inikela ngezinyathelo ezi-5 zokwakha okuqukethwe kweholide okuyimpumelelo okwenzelwe izethameli zenhlalo:
Hlanganisa izinsiza zakho futhi wakhe uhlelo
Thola ukukhuthazwa kwedatha ngokubuyekeza okuqukethwe okwenze kahle onyakeni owedlule.
Hlela futhi Dala okuqukethwe okulungiselelwe isiteshi ngasinye naphakathi.
Sabalalisa okuqukethwe okulungiselelwe esiteshini ngasinye.
Linganisa Ukuthuthukisa futhi wakhe umkhankaso ongcono ngonyaka ozayo!
Tags: ukuhlela amaholideusuku lokuzimelausuku lokuzimela infographicuJuly 4thokungajwayelekilei-infographic engalingani